नेतृत्व फेर्न घोचफेच र प्रभाब पार्दै गगन थापा र बिश्वप्रकाश शर्मा «
नेतृत्व फेर्न घोचफेच र प्रभाब पार्दै गगन थापा र बिश्वप्रकाश शर्मा
प्रकाशित मिति : १४ जेष्ठ २०७६, मंगलवार १४:०७
कांग्रेसका दुई युवा नेताबीच पार्टी नेतृत्व परिवर्तनलाई लिएर सोमबार एक कार्यक्रममा घोचपेच भएको छ। केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले अहिलेकै नेतृत्वबाट पार्टीमा जागरण नआउने बताएपछि प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले अहिल्यै नेतृत्व परिवर्तनको बेला नभएको भन्दै बचाउ गरे। थापाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको दुईतिहाइको कम्युनिस्ट सरकारसँग लड्न अहिलेकै नेतृत्वले नसक्ने जिकिर गरेका थिए।
नागरिकका हक-अधिकार खोस्ने गरी एकपछि अर्को विधेयक ल्याएर प्रधानमन्त्री ‘राजा’ हुन खोजेकाले त्यसलाई रोक्ने तागत भएको कांग्रेस चाहिएको थापाको भनाइ थियो।
‘कांग्रेस अहिले जुन अवस्थामा छ, त्यही तागतले राजा हुन खोज्नेलाई रोक्न सक्छौं? सक्दैनौं,’ उनले सोमबार काठमाडौंमा आयोजित नेपाल प्रेस युनियनको २८ औं वार्षिकोत्सवमा भने, ‘हामी देशैभर जागरण अभियानमा छौं। देश संघीयतामा गइसक्दा पनि पार्टीले जिल्ला चिन्छ, पूर्व गाविस अध्यक्ष चिन्छ। प्रदेश चिन्दैन, गाउँपालिका चिन्दैन। अनि कसरी हुन्छ जागरण?’
जागरणका लागि संघीय संरचना र पार्टी विधानअनुसार गाउँसम्म संगठन चाहिने उनले बताए। संगठन निर्माणका लागि अधिवेशनको खाँचो हुने उनले औंल्याए।
‘कांग्रेसलाई जागरण मात्र होइन, अधिवेशन चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘कांग्रेसले अहिले अधिवेशन किन नगर्ने? देशभर संघीय संरचनाअनुसार संगठन विस्तार किन नगर्ने? कसले रोकेको छ? के का लागि रोक्ने, किन रोक्ने?’
थापाले सभापति शेरबहादुर देउवालगायत शीर्ष नेताले पार्टी र देश निर्माणमा दिएको योगदानको चर्चासमेत गरे।
‘शीर्ष नेतालाई सम्मान छ। तपाईं सम्मानित हुनुहुन्छ तर तपाईं अब थाक्नुभयो, विश्राम गर्नुहोस् भनेर भन्ने कि नभन्ने?’ उनले भने, ‘विचारमा क्रान्ति गर्नुपर्ने बेला आएको छ। संगठन चुस्त दुरुस्त पनि राख्नुपर्नेछ।’
जवाफमा प्रवक्ता शर्माले पार्टीलाई नवीन ढंगले रूपान्तरण गर्न जागरण अभियानले सघाउने दाबी गरे। नेतृत्व फेर्नुपर्ने थापाको भनाइलाई शर्माले यसरी खण्डन गरे, ‘जेठ १४ गते रूपान्तरण थालेर १५ गते नै कांग्रेस रूपान्तरण हुन्छ भन्ने कारुण कल्पनामा म जान चाहन्न। यो क्रमश: हुने विषय हो।’
उनले उदाहरण पनि दिँदै भने, ‘कोही बिरामी भयो भने अपरेसन थिएटरभित्र लैजानुअघि औषधि खुवाइन्छ, त्यो औषधि अहिले देशैभर चलिराखेको जागरण हो।’
जागरण अभियान गाउँदेखि केन्द्रसम्म संवादका लागि भएको उनको भनाइ थियो।
‘गाउँगाउँ जाँदा कांग्रेसले संवाद गर्नुपर्छ। केन्द्रदेखि गाउँ तहसम्मै नेताहरू रूपान्तरण हुन जरुरी छ,’ शर्माले भने।
प्रवक्ता शर्मा एउटा विन्दुमा भने थापासँग सहमत देखिए। त्यो हो- कांग्रेस समयअनुसार बदलिएन भने विदा लिनुपर्छ। शर्माले थपे, ‘कांग्रेस जो बदलिन्छ त्यसले नेतृत्व लिन्छ। जो बदलिँदैनन् तिनले विदा लिन्छन्। चाहे केन्द्र होस् वा गाउँमा।’
नेतृत्व फेर्न केही समय चाहिने शर्माको भनाइ छ। ‘केही समय चाहिन्छ। निश्चित कालखण्ड चाहिन्छ। आजको भोलि रूपान्तरण खोजेर हुँदैन,’ उनले भने।
थापा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला खेमाका हुन् भने शर्मा सभापति नजिक छन्। डेढ वर्षअघि संघ र प्रदेशको चुनावमा अनपेक्षित हारपछि कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको माग हुँदै आएको छ। सभापति देउवाको कार्यकाल एक वर्ष बाँकी रहेका बेला फेरि महाधिवेशनको एजेन्डा कांग्रेसभित्र बहसको विषय बन्ने गरेको छ।